Ganzabeen sa'aatii haarawaa galmeesiste
Ganzabeen sa'aatii haarawaa galmeesiste Featured
Atileeti Ganzabee Dibaabaa
Finfinnee: Waldaan Federeeshinoota Atileetiksii Addunyaa (IAAF) waggaa lamati all tokkokan adeemsifamu dorgommii atileetiksii mana keessaa
eedda jalqabe waggoota 33 lakkofsiseera. Waggoottan kanneen keessatti biyyoota adda addaatt yeroo 17ffaaf haala miidhagaadhaan gaggeeffameera.
Dorgommiin kunis adeemsifamaa kan ture koorniyaa lameeniinu gosawwan atileetiksii meetira 60 kaase hanga kuma sadiin. Dorgommii kanatti atileetonnii korniyaa lameeniinu mo'atan badhaasa doolaarii hedduu badhaafamu.
Akka Waldaan Federeeshinoota Atileetiksii Addunyaa mul'isuutti atileetonni dorgommii kanaaf filaman magaaloota addaddaatti duraan dursanii dorgommii gulaalaa adeemsifachuudhaan qabxii dimshaashaan atileetota caalmaa argataniidha.
Haaluma kanaan dogommii gulaalaa isa jalqabaa Sanbata darbe adeemsifameetti atileetonni Itoophiyaa koorniyaa lameeniinu injifannoo goonfataniiru.
Fiigicha meetira kuma tokkoofi 500 Jarman Magaalaa Kaarlusitti dubartoota giddutti adeemsifameetti atileeti beekamtuun Itoophiyaa Ganzabee Dibaabaa daqiiqaa 3:57.45n tokkoffaaffa ba'uun mo'ateetti. Ganzabeen fiigicha kanatti mo'achuushee malee kanaan dura sa'aatii iddoo sanaa kan ofumasheetiin qabamee ture fooyyeessuudhaan olaantummaashee mul'isteetti.
Atileeti Ganzabeen Finfinneetti wayita dorgommii kanaaf qophirra turte “ani kanan shaakalu qofaa koo miti, obbolaa koo Xirunashifi Anaa Dibaabaa waliini. Qophii gaarii waanan taasiseef qabxii gaariin galmeesisa” jechuun ibsitee turte.
Ganzabeen yeroo baay'ee gorsa hangafootashee keessumattuu Xirunash Dibaabaa waan dhaggeeffattuuf qabxii boonsaa akkanaa fiduuf akka ishee gargaarees ni dubbatti.
Dorgommii kanatti atileetonni Ingilizifi Keeniyaa lammaffaafi sadaffaa yoo ba'an quxusun ishee Anaa Dibaabaa ammoo sadarkaa 10ffaa argachuudhaan xumuruun ishee beekameera.
Haala walfakkaatuun fiigicha meetira kuma sadii kan dhiiroota gidduutti adeemsifameen Hagoos Gabra Hiwoot daqiiqaa 7:37.91n, Yoomif Qajeelchaa ammoo daqiiqaa 7:38.67n tokkoffaafi lammaffaa ta'uun mo'ataniiru. Atileetiin Morookoo Abdallaat Igudeer daqiqaa 7:39.91n sadarkaa sadaffaa argateera. Karaa biraatiin, fiigicha meetira kuma sadiin Roobi darbee Magaalaa Jarman, Dusildorfitti dhiiroota gidduutti adeemsifameen Atileet Yoomiif Qajeelchaa tokkoffaa ba'uunsaa beekameera.
Sagantaa Waldaan Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa baaseen akka mul'iseetti dorgommiiwwaan hafan guyyoota 20 keessatti adeemsifamu. Dorgommiiwwan kunneen Ispeen magaalaa Maadiriditti, Ameerikaa Bostanitti, Poolaand Torunuttifi Iskootilaandi Maalaaskaawutti adeemsifamu.
Torban kana/This_Week 12426
Guyyaa mara/All_Days 1821846